Design design interior modern classic houses - Architectural designer interior design - Architect designer pret - Nobili Interior design, studio, architect, designer, companies, design, prices
Inside design design services villas classic modern style villas - mukati meimba houses turnkey
Kune imwe nzvimbo yekare, yakasvibiswa, yemazuva ano kana yeMediterranean yakagadzirirwa mukati meimba yako, imba, hotele, restaurant, bar, cafe kana hofisi, iwe unoda mazano ehutano hwemukati wekugadzira firm ine ruzivo mumunda. Kazhinji mukati mekugadzira mapurisa yakagadzirwa nekambani yedu mararamiro ekushongedza uye midziyo yekunze, inoratidza kuratidzira komuridzi uye chizivo. Iyi ndiyo nheyo yenyaradzo, saka unoda kunyatsosarudza kambani yekugadzira iyo yakakwanisa iyo mukati me 3d. boka redu Noble Interior Design inogona imi Nyanzvi nyanzvi kusika mukati akaitwa yokutandarira wako, yokurara uye kicheni pamwe kuteerera guru kese, kwete chete nokuda maitiro uye mhepo, asi kuti pave nzvimbo sezvo dzichipfekeka pasina pazviri pasingabviri kuti kufungidzira nyaradzo yechokwadi. Tinogona kugadzira yenyu tsika mukati design, mukati magadzirirwo dzimba, zvitoro, maresitorendi, nembariro, cafes, netsvimbo uye Salons runako mumaguta akasiyana-siyana akadai muBucharest, Constanta, Ploiesti, Brasov, Pitesti uye anogona kusika kwakakwana uye kunzwisisa zvirongwa chero nzvimbo chero kuvaka kana private dzokugara kana dzokutengesa nzvimbo. Iyo nzira yekutaura ichatibvumira kuti tive nekugadzirwa kwakasiyana-siyana kunoratidzira unhu hwomuridzi, nokudaro kupa hushandisi hwekushandisa nzvimbo yekugara, dzimba, makikani, kupfeka. Kugadzira nzvimbo yemukati yeimba yekugara nekicheni inonetsa zvikuru asi inopisa panguva imwe chete sezvainofanira kunyatsoongorora zvakasarudzwa zvinhu, midziyo, mavara ekugadzira mukati mekugadzira. Our nyanzvi vagadziri, ezvivako uye vagadziri nyanzvi ndanzwawo kuti kusika dzichipfekeka dzezvimwe kuti zvakazara kugutsa mumwe mutengi unhu, tichiratidza chimiro uye manyorerwo upenyu, zvichiita uye hunakidze nguva dzose mubasa zvitsva kumusoro. Nobili Interior Design inopa maitiro akanaka, anoshanda uye mazuva ano ekugadzira mukati mekugadzira uye kubwinya kwemhando ipi zvayo yemuzinda weimba yekasiki neimba yepamusoro yepamusoro kana yeimba yepamusoro yepamusoro. On yedu yepaIndaneti unogona kuwana zvedongo usina kukonekita, fenicha wokuItaly, nemikova, huni, midziyo yemagetsi Smeg, chiedza, parquet Kahrs, kangas uye pakona Ditre Italy nedzimwe zvemaoresa zhinji vaitenga zvakananga kubva kambani yedu mitengo mugadziri. Chimwe chezvinhu zvisingaverengeki zvekugadzirisa kwakadaro kugadzirisa kukwanisa kuunza pfungwa dzepakutanga dzinobva pane zvinoitika zvemazuva ano, eclectic, baroque, Mediterranea, kana mamiriro emadziro ezvino. Iko mukati mekugadzira nyanzvi dzakawana ruzivo munguva uye nguva apo vaisangana nebasa rakaoma rokubatanidza nzvimbo dzakawanda dzinoshanda munzvimbo imwe chete, asi vachichengetedza nyaradzo uye chimiro. Mumwe kuitika itsva magadzirirwo zvokunyaradza mapurani, kana afunge imba kana Villa, ndiko kuti asike yokutandarira uye kicheni mune mubatanidzwa, anomirira mukamuri rimwe chete ne huru mbiri Mabasa: nzvimbo kubika uye isa kukoka vaenzi kuti yokudyira uye varaidzo. Designers Noble Interior Design akabvuma nomufaro chero dambudziko chero kunenge kuvakwa inomirira kuramba purojekiti kuuya pamwe vaitaura kuti repartitioning dzezvimwe kubva kuvakwa danho konekwa, nani uye kunze mavakirwo nechivako, kuunza ose chirongwa pfungwa uye vaitaura kuti mukati zvakagadzirwa yakasiyana uye munhu zvichienderana.